TRUESTORY: လက်တလော ဖြစ်နေသည့် သူရိန်လှိုင်ဝင်း ပြဿနာ မှာ Myanmar News Update ၏ Facebook အား Hack ခံရခြင်းကြောင့် ဟု သိရ
လက်တလော ဖြစ်နေသည့် သူရိန်လှိုင်ဝင်း ပြဿနာ မှာ Myanmar News Update ၏ Facebook အား Hack ခံရခြင်းကြောင့် ဟု သိရ
ကျနော်၏ Myanmar News Update ၏
Facebook Fan Page အား ၃၀-၈-၂၀၁၃
ရက်နေ့ မနက် ၁၀နာရီ ခွဲတွင် Password
စတင် အချိန်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၃၁-၈-၂၀၁၃
ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီခွဲ မှ စတင်ပြီး ကျနော်တင်နေသော Admin အားလုံး ဖြုတ် ချသွားပါတယ်။ မိမိ၏ Fan Page တစ်ခုလုံး Hack လုပ်ခံရပါတယ်။ ကျနော်၏ Fan Page ရရှိရန်အတွက် ပြန်လည်ကြိုးစားလျက် ရှိပါတယ်။ Facebook အဖွဲ့အစည်း သို့လည်း ပြန်လည်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နာမည်ကြီး Hacker Group များမှလည်း ကူညီလျက် ရှိပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် Myanmar News Update မှာ Blog ww.myanmarnewsupdates.blogspot.com တစ်ခုတည်းသာ ရှိတော့ပါသည်။ ယခု အချိန်တွင် ကျနော်၏ Blog တွင် Facebook Fan Page အား ဖြုတ်ချထား ပါတယ်။
သတင်းများအားMyanmarNews Update တစ်ခုတည်း မှ News Feed ယူသော် လည်း အောက်မှာတွေ့ရတဲ့ http://shwefulwar.
blogspot. com ဆိုတဲ့ Blog မှ သတင်းယူထား ကြောင်း တွေ့ ရှိရပါတယ်။
ယခုအခါ Myanmar News Update, Eleven Media နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ကိုသူရိန်လှိုင် ဝင်း ဆိုပြီး တင်ထားပါသည်။ အခြားသတင်းများ ကိုလည်း ဆက်လက် Post လုပ်လျက်ရှိပါ သည်။မိမိFan Page အား Hack လုပ်သောသူမှာ ငွေကြေးအရသော် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ရန် သော် လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ရန်သော် လည်းကောင်း၊ မည် သည့် အတွက် ပြုလုပ် သည်ကို မိမိအနေဖြင့် မပြောတတ်တော့ပါ။ မိမိတွင် Admin Team ဟူပြီး မရှိပါ။ တစ်ဦးတည်း Admin များ ခွဲပြီး Post တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြန်လည်ရရှိခြင်းမရှိပါကအပြီးအပိုင်ဖျက်နိုင်ရေးကြိုးစားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းအသိပေး ကြေ ငာ အပ်ပါသည်။ တစ်ခြား မီဒီယာ များမှလည်း ဒီသတင်းကို ကူးယူဖော်ပြပေးပါလို့ ကျွန်တော် မေတ္တာရပ် ခံပါတယ် ဗျာ .. Myanmar News Updates ချစ်ပရိတ်သတ်များအားလုံး ကျေးဇူးပြုလို့ share ပေး ၊ ကူးယူဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ် ...